ကမ္ဘာပေါ်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်စရာ အကောင်းဆုံး ၁၀ နိုင်ငံထဲမှ မြန်မာနိုင်ငံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » ကမ္ဘာပေါ်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်စရာ အကောင်းဆုံး ၁၀ နိုင်ငံထဲမှ မြန်မာနိုင်ငံ
ကမ္ဘာပေါ်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် စိုးရိမ်စရာ အကောင်းဆုံး ၁၀ နိုင်ငံထဲမှ မြန်မာနိုင်ငံ
Posted by ကို သာ on Aug 18, 2012 in Environment |7comments
မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလွန်စိုးရိမ်စရာ အကောင်းဆုံး ၁၀ နိုင်ငံထဲတွင်ပါဝင်နေကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့်အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့ဖြစ် မက်ပလီခရော်ဒ် (Maplecroft)က သတိပေးလိုက်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၇ နိုင်ငံအား လေ့လာခဲ့ရာအန္တရာယ်အရှိဆုံး ၁၀ နိုင်ငံစာရင်းတွင် အာရှမှ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်နှင့်
အခြားနိုင်ငံများမှာ ဟေတီ၊ နီကာရာဂွာ၊ ဟွန်ဒူးရပ်၊ ဒိုမိုနီကန် တို့ ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့က ဆိုပါသည်။
နိုင်ငံများ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်ခြေအား တွက်ချက်ရာတွင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအပေါ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှ သက်ရောက်နိုင်သော ပမာဏ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှု အခြေအနေ၊ တိုင်းပြည်၏ ခံနိုင်ရည်တို.အပေါ်တွင် တွက်ချက်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်း အားနည်းပြီး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလည်း ညံ့ဖျင်းနေလျှင် ဆိုးကျိုး ပိုခံစားရနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
မက်ပလီခရော်ဒ်အဖွဲ့၏ ယခုကဲ့သို. သတိပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိုးလေ၀သပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်က
“အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့ မကြာခဏ ပြောနေတာပဲဗျ။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအပိုင်းက တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ခြုံကြည့်ရင် အားနည်းတာပေါ့။ မလုပ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်တဲ့နေရာတွေ ရှိပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တွေ့ တွေ့ဖူးတာက ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဟင်္သာတပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ဦးဆောင်တဲ့သူက အလွန်ကောင်းတယ်ဗျ။ ဦးဆောင်မှု မပေးနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးတွေကျတော့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စောင့်ရှောက်ရေးကို သိပ်နားမလည်တဲ့ နေရာကျတော့ ဟာသွားတာပေါ့။ အပေါ်ကတော့ လုပ်နေတာပဲ အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့တာ။ ဒါတွေက အလုပ်သဘောအရ ကြည့်ရင် ဟုတ်သလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် အတွင်းကျကျကြည့်ရမှာ။ အဓိက က ၂ချက်ဗျ။ ပထမက good management ဗျ။ နောက်တခု must participation။ အဲဒီ ၂ ခုရှိရင် အောင်မြင်မယ်။ မရှိရင် မအောင်မြင်ဘူးဗျ။”
လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော မြစ်ရေကြီးမှုများ ပတ်သက်ပြီး မိုးလေ၀သပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်က လာမည့်စက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာအတွင်း ဂရုစိုက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါသည်။
“မုတ်သုံရွာတဲ့မိုးရယ်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်းဖြစ်လို့ ရွာတဲ့မိုးရယ်၊ အရှေ့ဘက်က တိုင်ဖွန်းအကြွင်းအကျန်ကြောင့် ရွာတဲ့မိုးရယ် ဒီ ၃ ခု ကြုံကြိုက်တဲ့အခါတော့ ရေကြီးမှုက အောက်တိုဘာအထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ရေကြီးမှုက ၃ ကြိမ်ရှိတော့ အောက်တိုဘာမှာ ရေကြီးမှုက ရှိကို ရှိဦးမှာပါ။ အတိုင်းအတာတခုတော့ ရှိမှာပဲ။ ပျက်စီးမှု များ မများသာ ကံပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။”
မည်သို.ပင်ဖြစ်စေကာမူ ကြိုသိလျှင် ကြိုပြင်ကြရမည်မဟုတ်ပါလော။ ။
အဲ့စာရင်းထဲက အော်တို ထွက်လိမ့်မယ် ..
ချမ်းသာအောင် ကြိုးစားကြ ..
ခု .. ကျု့ပ်လည်း ကြိုးစားနေဒယ် ..
လောလောဆယ် တစ်ဆယ် ..
အဲ .. ၁၅ ကျပ် ဆိုလားဘဲ …
ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင် ကမ္ဘာပျက်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကြီး အကုန်ပျက်သွားတာမဟုတ်ဘဲ
သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကြုံတွေ့ခံစားရသူတွေ အတွက် အကွက်လိုက် ပျက်ရခြင်းပဲလို့ထင်တယ်။
ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမဖြစ်လို့ အသာအယာထိုင်နေပေမဲ့
အခု ရေကြီးနေတဲ့ သာပေါင်းလို ဒေသက လူတွေကတော့ ကမ္ဘာပျက်နေပြီ။….
အချိန်မှီ ခန့်မှန်း တွက်ဆ နိုင်မှု (ရေတို ရေရှည်) နှင့် awareness အသိနားလည်မှု ရှိဖို့လိုပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဖြစ်သင့်သလောက် မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့…
ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ရေ … သစ်ထူးလွင် Web Site မှာ ဖော်ပြ ထားတဲ့ ဆောင်းပါး နဲ့
မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေ၀သဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ မြစ် ၄ စင်း ရေကြီးနေတာကြောင့် မြို့ ၅ မြို့ စိုးရိမ် ရေမှတ်အထက် ရောက်ရှိနေပါတယ်။ သံလွင်မြစ်ရေဟာ ဘားအံမြို့မှာ ၂ ပေခွဲကျော်၊ ရွှေကျင်မြစ်ရေဟာ ရွှေကျင်မြို့မှာ ၁ ပေခွဲခန့်၊ င၀န်မြစ်ရေဟာ ငသိုင်း ချောင်းမြို့မှာ ၂ ပေခွဲခန့်၊ စစ်တောင်းမြစ်ရေဟာ တောင်ငူမှာ ၁ ပေကျော်နဲ့ မဒေါက်မှာ ၄ ပေခွဲခန့်ရှိနေပြီး အဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့ စိုးရိမ်ရေမှတ် အထက် ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။
by ကိုသက် – ဒီဗွီဘီ ”
ဒီ တပိုဒ် ပဲ လွဲတယ်… အဲဒါလေး လာပြောတာ ပါ .. နော့
အဲ့ဒီကနေ ကူးလာပြီး တစ်ပိုဒ် ဖြုတ် … ပြီး ခပ်တည်တည် လာတင် တာ ဆိုရင်တော့ .. အင်း .. အနိစ္စ …..
ဒီမှာ Thit Htoo Lwin ရဲ့ Link မှာ …
အဓိက က ၂ချက်ဗျ။ ပထမက good management ဗျ။ နောက်တခု must participation။ အဲဒီ ၂ ခုရှိရင် အောင်မြင်မယ်။ မရှိရင် မအောင်မြင်ဘူးဗျ။”
ဆူနာမီတို့ နာဂစ် တို့ ကို ကိုယ့်ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ သက်တမ်းတိုတိုလေး အတွင်း ကြုံလိုက်ရတော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ သဘာဝ ဘေးအန်နရယ် တွေရဲ့ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စား မိလို့ ကိုယ်သိသလောက် မှတ်သလောက် ကလေး ဝင်ပွါးလိုက်ပါဦးမယ် ။ အရင် က ဂဘာ့ ရာသီဥတု ဆိုတာ ရုတ်ချည်း အချိန်တိုတို နှစ်တိုတို အတွင်း ပြောင်းလဲတတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ နှစ်ပေါင်း ရာ၊ ထောင်၊ သောင်း ချီပြီးမှ ပြောင်းလဲတတ်တာ ။ ဂဘာ မြေရဲ့ အောက်ထဲကို ပေပေါင်းများစွာ မိုင်ချီပြီး ဆင်း သွားတဲ့ သတ်ထု တွင်းတွေ ၊ ကျောက်မီး သွေးတွင်းတွေ က ရလာတဲ့ ဂဘာ့ မြေအောက် ကျောက်လွှာတွေရဲ့ အပိုင်း အစတွေကို လေ့လာရင်း တွေ.လာတာက ဂဘာဟာ ခေတ် နှစ်ခေတ် ပြောင်းခဲ့ ပြီးပြီ ။ တခေတ် ကို နှစ် ( ၂ ) သန်း လောက် အချိန်ယူပြီးမှ ပြောင်းခဲ့တာ ။ ပထမ အပူခေတ် ။ ဂဘာကြီး ပူပြင်း လောင်မြိုက် မှုနဲ့ အဆုံး သတ်ခဲ့တာ ။ ၂၀၁၂ ရုပ်ရှင် ထဲ ကလိုဖြစ်မှာပေါ့ ။ ဒုတိယ အအေး ခေတ် ။ လူ သတ်တဝါ တွေ နေထိုင်ရှင်သန် လို့ မရနိုင်လောက်တဲ့ ရေခဲမှတ်အောက် အနုတ်ကိန်းများများ ဆင်းသွားတာမျိုးပေါ့ ။ ICE ရုပ်ရှင် ကားထဲကလိုမျိုး ဖြစ်မှာပေါ့ ။ ဟော လာပြီ အခု တတိယ ခေတ် ။ ဒီခေတ် က အပူ ခေတ် ။ အပူပိုင်း ရပ်ဝန်းတွေ တဖြေးဖြေး ကျယ်ပြန့်လာတယ် ။ အရင် က လူအများအပြား နေထိုင်ရှင်သန်ခဲ့ တဲ့ နေရာတွေဟာ ခုချိန်မှာ ပူပြင်းတဲ့ ဒေသတွေ ၊ တောင်ဂတုံး ကုန်းမြင့်ဒေသ တွေ ၊ ကန်တာရ တွေ ဖြစ်လာတယ် ။ ဒါက သဘာဝ တရားကြီးဟာ သူ့ခေတ်နဲ့သူ သဘာဝ အတိုင်း ဖြစ်နေတာ ။ ဒါကို လူတွေ က အဆင်း ကို ဘီးတပ်ပြီး လွှတ်လိုက်တယ် ။ သစ်ပင်တွေ အများ အပြား ခုတ်တယ် ။ တောင်တွေ ဖြိုတယ် ။ သဘာဝ အတိုင်း ရှိနေတဲ့ ရာသီဥတု ကို ပြုပြင်ဖန်တီးတယ် ။ ဒီအထဲ မှာ တီထွင်သုံးစွဲ မှုတွေလည်းပါတယ် ။ ဥပမာ CFC လို ဓာတ်ငွေ မျိုးတွေပေါ့ ။ ကလိုရို ဖရူရိုကာဗွန် ။ အဲကွန်း ၊ ရေခဲသေတ်တာ တွေထဲ ထည့်သုံးတဲ့ ဓာတ်ငွေ မျိုးပေါ့ ။ အဲဒီ အထဲက ကလိုရင်း တွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုထဲမှာ မနေနိုင်ဘူး ၊ သူ့ရဲ့ အရည်ပျော်မှတ် က မိုင်းနပ် အောက် အများကြီး ဆင်းနေတော့ သူ့ကို အလုံပိတ်ထားတဲ့ Cylinder တွေထဲက ယိုစိမ့် ထွက်နိုင်တာနဲ့ ချက်ချင်း အပေါ် ကိုတက် သွားတယ် ။ ဘယ်အထိ တက်သွားလည်း ဆို စထရိုပိုစပီးယား အလွှာ အထိ တက်သွားတယ် ။ ဂဘာ မြေပြင် ကနေ ဆိုရင် အထက်ကို ကီလိုမီတာ ( ၂၀ ) / ပေပေါင်း ( ၆ ) သောင်း ကျော်လောက် တက်သွားတယ် ။ ပြီးတော့ အက်ဆစ် လို ဂုဏ်သတ်တိ ရှိလေတော့ အိုဇုံးလွှာ မှာရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင် အက်တမ် တွေကိုစားပစ်လိုက်တယ် ။ အိုဇုံးလွှာ ဆိုတာက အောက်ဆီဂျင် အက်တမ် သုံးလုံး အိုသရီး မဟုတ်လား ? ။ အိုဇုံးလွှာ ပါးရတဲ့ အကြောင်းထဲမှာ ဒါကြောင့်လဲ အများကြီး ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် နေရောင်ခြည် ( ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည် ) ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှု နည်းလာတယ် ။ အပူပိုင်း ဒေသတွေ မှာ ပူသထက် ပိုပူလာတယ် ။ ဝန်ရိုးစွန်း ဒေသက ရေခဲတောင် တွေ ဂဘာ့ ရေခဲတောင်တွေ အ ရည်ပျော်လာမယ် ။ ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမယ် ။ သဘာဝ အတိုင်း ရှိနေတဲ့ ရေနွေး စီးကြောင်း ၊ ရေအေးစီးကြောင်း တွေ ပြောင်းလဲလာလို့ လေဖိအားတွေ လေကြောင်း တွေ ပြောင်းလဲလာမယ် ။ မုန်တိုင်း တွေ ဖြစ်လာမယ် ။ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းတာတွေ ရေကြီးတာ တွေ ဖြစ်လာမယ် ။ အပူ အအေး ပြောင်းလဲမှု ကြောင့် မီးတောင် တွေ ပေါက်ကွဲလာမယ် ။ ငလျှင် တွေ ဖြစ်လာမယ် ။ အပူ ခေတ်မှာ ပုံမှန်သွားနေတဲ့ သဘာဝ တရား ကြီး ရဲ့ ရာသီဥတု နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ အလျှင် အမြန်ပြောင်းလဲ လာမယ် ။ ကောင်းသော ပြောင်းလဲ ခြင်း မျိုးနဲ့ မဟုတ်ပဲ ကပ်ဆိုး ဘေးအန်နရယ် ဆိုး တွေနဲ့ ပြောင်းလဲလာမယ် ။ ဒါနဲ့ စကားစပ်လို့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင် မြို့နယ်ဟာ တနှစ်ထက် တနှစ် ပိုပူလာတယ် ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အရောင်စုံ လူသားတွေ ပုံစံအမျိုးမျိုး အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ သစ်ပင်ကြီးငယ် အကုန်ခုတ်ခဲ့လို့ပဲ ။ ဆယ်နှစ် ဝန်းကျင် လောက် မနားတမ်း ခုတ်ခဲ့တာ ဆိုတော့ ခု အပင်ကြီး မရှိတော့ဘူး ။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကချင်ပြည်နယ် ၊ ပဲခူး ရိုးမ စတဲ့ နေရာတွေ တဖြေးဖြေး နဲ့ ကုန်တော့မယ် ။ မြေတွေ တူး မိုင်းတွေခွဲ သစ်တွေခုတ် – ကုန်ရင် ဖုတ်ဖက်ခါ ပြန်တော့မယ် တာ့တာ — တရုတ်ပြည်ကို ။ကျန်ခဲ့ကြ ! မိုးခေါင် – ရေကြီး – ငလျှင်လှုပ် – မုန်တိုင်းမိ – အပူချိန်မြင့် ။ သဘာဝ က ပေးထားတဲ့ တတိုင်းတွေ – အတားအဆီး တွေ – အကာအရံ တွေ ငါတို့ အားလုံး လိုချင်သလောက် အကုန်ယူသွားပြီ ။
အိန္ဒိယသမုဒ်ရာ ရေပြင်ကနေ ၂.၁ မီတာဘဲ မြင့်တယ်
ခဏ ခဏ ပြောကျတယ် မကြာခင် ရေမြုပ်တော့မယ်တဲ့
ခုထိ ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူး
အဲ့ဒိ မော်လဒိုက် နိူင်ငံကြတော့ ဘာဖြစ်ရို့တုန်း
စာရင်းထဲ မပါတာ …
ကျွန်တော်က သစ်ထူးလွင်မှာပါတဲ့ သတင်းလေးကို မန်းဂေဇက် ပရိတ်သတ်ကြီးလည်းသိစေချင်တယ်။
အတွေးပါးပါးလည်းပေးချင်ပါတယ်။သစ်ထူးလွင် Web ကလည်း တော်တန်ရုံ ကွန်နက်ရှင်းနဲ. ဖတ်လို.မရပါ။
မန်းဂေဇက် ကတော့ ရတာများတယ်။ဒါကြောင့် share သလိုဖြစ်သွားတယ်။အောက်ကလည်း Ref; မထည့်နိုင်အောင်ကို ကျွန်တော်သုံးခွင့်ရတဲ့နေရာရဲ.ကွန်နက်ရှင်းကဆိုးရွားပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောင် သတိထားပါ့မယ်။ကျေးဇူးပါ။